Sembana ny iPad-ko ary milaza hoe 'Connect to iTunes'! Ity ny antony & ny fanamboarana. - Ipad
iphone 8 niraikitra tamin'ny efijery fampidinana
Ahoana no manamboatra efijery iphone 6 tsy mamaly
overheating amin'ny iphone 6 sy ny fantson'ny bateria
rehefa bandy manoroka ny handrinao
Sembana ny iPad-ko ary milaza hoe 'Connect to iTunes'! Ity ny antony & The Fix.
Manana iPad kilemaina ianao ary mihidy tanteraka amin'izany. Milaza anao hifandray amin'ny iTunes izy io, saingy tsy azonao antoka ny antony. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao hoe maninona no tsy mandeha ny iPad-nao ary asehoy anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny tsara !
Fa maninona no tsy kilemaina ny iPad-ko?
Nanjary sembana ny iPad-nao raha diso ny fanisanao ny passcode-nao matetika loatra. Ity ny zavatra hitranga raha toa ka mampiditra passcode iPad diso diso imbetsaka ianao:
ohatra amin'ny taratasy fanolorana ho an'ny fifindra-monina amin'ny Espaniôla
1-5 andrana: Tsara ianao!
Fanandramana 6: Tsy mandeha 1 minitra ny iPad-nao.
Fanandramana 7: Tsy mandeha mandritra ny 5 minitra ny iPad-nao.
Fanandramana 8: Tsy mandeha mandritra ny 15 minitra ny iPad-nao.
Fanandramana 9: Tsy afaka adiny iray ny iPad anao.
Fanandramana 10: hiteny ny iPad-nao hoe: “sembana ny iPad. Ampifandraiso amin'ny iTunes ”.
Zava-dehibe ny manamarika fa afaka miditra ny passcode diso diso imbetsaka araka izay tadiavinao ianao nefa tsy manidy ny iPad-nao. Ka raha 111111 ny passcode-nao dia afaka miditra in-dimy amby roapolo 111112 misimisy ianao raha tsy manidy ny iPad-nao.
Ahoana no nahatonga ny iPad tsy ho kilema?
Mety hieritreritra anakampo ianao hoe: “Andraso kely! Tsy nasiako impolo diso ny passcode passer-ko! ' Marina angamba izany.
Betsaka ny fotoana, sembana ny iPads satria ny ankizy kely tia mikitika bokotra na namana tsy te hahafantatra ny lahatsoratrao sy ny mailakao dia miditra amin'ny passcode diso impolo misesy.
Azoko atao ve ny mamaha ny iPad sembana?
Mampalahelo fa tsy azo vohana ny iPad-nao raha tsy mandeha io. Tsy maintsy mampifandray ny iPad amin'ny iTunes ianao ary hamerina azy io.
Misy ny olona mino fa ny Apple techs dia manana programa rindrambaiko manokana na miasa manodidina an'io olana io, saingy tsy marina izany. Raha miditra amin'ny Apple Store miaraka amin'ny iPad kilemaina ianao dia hofafan'izy ireo izany ary hanampy anao hametraka azy indray. Etsy ambany, hasehonay anao ny fomba hanaovana izany amin'ny fampiononana ao an-tranonao, ka tsy mila mandeha mitsangatsangana any amin'ny Apple Store ianao.
Tara loatra ve ny famerenako ny iPad-ko?
Ie. Tsy misy fomba hamerenana amin'ny laoniny ny iPad raha efa kilemaina izany.
Ahoana ny fomba hamafana ny iPad kilemainao
Misy fomba roa hamafana ny iPad sembana - mampiasa iTunes na iCloud. Manoro hevitra izahay hampiasa iTunes satria dingana tsotra kokoa izy io ary azo atao amin'ny iPad rehetra.
Fafao ny iPad ampiasainao amin'ny alàlan'ny iTunes
Ny fomba hamafana ny iPad amin'ny alàlan'ny iTunes dia ny fametrahana azy ao amin'ny maody DFU ary hamerina. Ity no karazana lalina indrindra amin'ny famerenana amin'ny laoniny iPad ary hamafa sy hampiditra ny tsipika kaody rehetra amin'ny iPad-nao. Zahao ny torolàlana tsikelikely ianarantsika Ahoana ny fametrahana ny iPad amin'ny fomba DFU !
Fafao ny iPad ampiasainao amin'ny alàlan'ny iCloud
Azonao atao ny mamafa ny iPad sembanao amin'ny alàlan'ny iCloud raha toa ka niditra an-tsokosoko tao amin'ny iCloud izy io ary ny Find My iPad dia nirehitra talohan'ny naha-kilemaina azy. Raha te hampiasa iCloud hamafana ny iPad ianao dia mankanesa any iCloud.com ary ampidiro ny Apple ID sy ny teny miafinao.
Avy eo, kitiho Mitadiava iPhone . Manaraka, tadiavo amin'ny sarintany ny iPad anao ary kitiho Fafao iPad .
Fametrahana ny iPad-nao
Ankehitriny rehefa tapitra ny ampahany manahirana dia andao hatsangana indray ny iPad-nao. Ny fomba fanangananao ny iPad anao dia miankina amin'ny karazana backup iPad anao.
Hiseho ny menio ataovy ny iPad raha vantany vao vita ny famerenana amin'ny laoniny DFU. Io menio io ihany no hitanao rehefa nakarinao avy tao anaty boaty ny iPad voalohany.
fivoriambe ao an-trano
Aorian'ny fametrahana ny fiteninao sy ny toerana roa hafa dia hahatratra ny menio Apps & Data ianao. Eto no ahafahanao mamerina ny backup iPad anao.
Famerenana amin'ny laoniny iCloud Backup
Raha manana backup iCloud ianao, paompy Avereno amin'ny iCloud backup . Tsy mila mifandray amin'ny iTunes ny iPad-nao raha miverina amin'ny laoniny avy amin'ny backup iCloud ianao.
Famerenana amin'ny laoniny iTunes Backup
Raha manana backup iTunes ianao dia paompy Avereno ny endrika iTunes Backup . Tsy maintsy mampifandray ny iPad amin'ny iTunes ianao mba hamerenana amin'ny laoniny avy amin'ny backup iTunes voatahiry. Raha vao mifandray ny iPad anao, dia hiseho avy hatrany ao amin'ny iTunes izay mampiseho aminao ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny backup.
Raha tsy manana iTunes na iCloud backup ianao dia mamporisika anao hialana amin'ny iPad ny iTunes mba hanafainganana ny fizarana napetraka. Azonao atao ny mampifangaro ny iPad amin'ny tranombokinao iTunes rehefa avy nametraka azy io indray ianao.
Tsara tahaka ny vaovao!
Naverinao tamin'ny laoniny ny iPad sembanao ary azonao atao ny manomboka mampiasa azy io indray! Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny namana sy fianakaviana amin'ny haino aman-jery sosialy hampahafantarana azy ireo ny zavatra hatao raha sembana ny iPad-ny. Aza misalasala mamela fanontaniana hafa anananao momba ny iPad ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.